တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အသစ်တဖန် … ရှင်သန်ခြင်း …
အသစ်တဖန် … ရှင်သန်ခြင်း …
အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင် …
ကျမကို မေ့များနေကြမလား … ။
Halloween night နား အနီးမှာ သရဲထချောက်တယ်တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ …
ကျမ မွေ့လျော်တဲ့ ဒီလောကထဲကို ခဏပြန်လာပါတယ်။
တလကျော်ကျော် အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျမဘလော့လေးကို အသက်ပြန်သွင်းပေးချင်လို့ပါ။
ကျမကို မမေ့မလျော့ သတိတရ ရှိနေကြသူများ …
ကျမကို မေ့လျော့နေကြသူများ …
ကျမကို သိသူ .. မသိသူ …
ထိုထိုသူ အားလုံးအတွက် …
ကျမရဲ့ ဘလော့လေး ပြန်လည်ရှင်သန်တဲ့ ဒီကနေ့မှာ
ကဗျာလေး တပုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ကျမဟာ အမိမြေနဲ့ အဝေးတနေရာမှာ ရောက်နေပြီး …
တချိန်လုံး သတိရ တမ်းတ စိတ်တွေနဲ့ နေရာသစ်မှာ လူအသစ်တွေနဲ့ နေသားမကျခဲ့ပါဘူး။
နောက်တော့လဲ … ကျမဟာ …
ဘယ်နေရာမှာ နေနေ … ဘယ်ရေကိုပဲ သောက်သုံးသုံး … ဘယ်လေကိုပဲ ရှူရှူ …
အားလုံးဟာ အတူတူ … ဆိုတဲ့ အသိတရားတခု ထားကြည့်လိုက်တော့ …
နေရာသစ်ဟာ ကျမအတွက် စိမ်းမနေတော့ပါဘူး။
အားလုံးဟာလည်း ကျမအတွက် နွေးထွေးသွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ် … ။
ဒါနဲ့ပဲ ဒီကဗျာလေးကို ချရေးမိသွားတယ် ဆိုပါတော့ … ။
ဖတ်ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပေးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် … ။
တမိုးထဲအောက်မှာ … ။
ခိုနားကာ ရပ်နေနေ …
ဒီ ကမ္ဘာမြေထက်မှာ … ။
ဘယ်လိုပင် ပြောင်းလဲလဲ …
သောက်သုံးရ အမြဲသာ … ။
ရှူရှိုက်ရမည်သာ … ။
ဒီလေကို ရှူရှိုက် …
“လူ” တွေပင် မဟုတ်လား … ။
ကောင်းတဲ့သူ … ဆိုးတဲ့သူ …
လိမ်မာသူ … မိုက်မဲသူ …
ဖြူစင်သူ … ညစ်ထေးသူ …
အားနည်းသူ … အားကြီးသူ …
ဆင်းရဲသူ … ချမ်းသာသူ …
ဒီလိုလူတွေ ခွဲခြားလို့ …
စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ … ။
စနစ်မကျ ဖြစ်ခဲ့ရ …
အပစ်ပယ် ခံခဲ့ရ …
ကမောက်ကမ ဖြစ်ခဲ့ရ … ။
စနစ်တွေ ပြောင်းလဲတိုင်း …
ဘ၀တွေလဲ ပြောင်းလဲ …
အနာဂတ်တွေလဲ ပြောင်းလဲ …
အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲလို့ … ။
နေရာတွေခွဲ … ဒေသတွေခွဲ …
လူမျိုးတွေကွဲ … ကိုးကွယ်ရာကွဲ …
အမျိုးစွဲ အရောင်စွဲနဲ့ …
ငါတို့တွေ ကွဲပြားခဲ့ကြ …
ငါတို့တွေ ခွဲခြားခဲ့ကြ … ။
“လူ” ဆိုတဲ့ အသိတရား
လက်ကိုင်ကာ ထားကြရင်ဖြင့် …
ပြန်ပြီး တည်ဆောက်ကြနိုင်လေမလား …
မှုန်ရီဝေ ၀ိုးတ၀ါးနဲ့ … စဉ်းစားခဲ့မိပါတယ် … ။
၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 5:31 PM
မမေ ပြန်ရေးတော့မယ်လို့ ပြောကတည်းက ၀မ်းသာတာ။ အခု ဘလော့ဂ်ကို ပြန်ဖွင့်တာ မြင်လိုက်ရတာ စိတ်ထဲ ပျော်လိုက်တာ။ ကျနော် အပျော်ဆုံး ဖြစ်မလားဘဲ။ ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာလည်း ကဗျာရေးပြီး အပျော်ကို ပုံဖော်ထားတယ်။ ကျနော် ပြန်ဖြစ်စေချင်တဲ့နေ့ ရောက်လာပြီပေါ့။ :)
မမမေရေ အခုလိုသိရတာ အများကြီးဝမ်းသာတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်နော် ချစ်မမ ။ အကိုကလိုစေးထူးက ပထမ ။ ညီမလေးက ဒုတိယနော် မမ :)
မမေဓာဝီ အခုလို ဘလော့ခ်ပြန်ရေးတာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
10/31/2007 2:48 AM
လာသွားတယ် အစ်မ။ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကိုစေးထူး ဆီမှာ ဖတ်လိုက်ရတော့
မမေရေ.. ၀မ်းသာတာကို ပြောမပြတတ်တော့ဘူး. အစစအရာရာ အဆင်ပြေ အေးချမ်းပါစေ လို့ နွေးထွေးသော လက်များနဲ့ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
မမေရေ.. မမေ blog ပြန်ရေးတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ တကယ် တကယ် ၀မ်းသာတယ် အမရေ.. အမရေးသမျှ အမြဲအားပေးနေပါတယ်.. :)
မမရယ် ကျနော့်ကိုတောင်အသိမပေးဘူးနော် ။ တိတ်တိတ်ကလေးနော်။ ကျနော်ဝမ်းသာပါတယ်။ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းဆိုတော့ မစိမ်းပါဘူးမမရယ်။ အရာအားလုံးကို ဘယ်သူမှ မပိုင်ဆိုင်ကြပါဘူး။
ကျမကို အားပေးကြိုဆိုကြတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။
ကိုစေးထူး … ကဗျာအတွက်လဲ ကျေးဇူးအထူးပါ။
ညီမလေးလင်းလက်၊ ဂုလု၊ ၀င်္ကပါ၊ ပန်ပန်၊ နုစံ၊ ပြည့်စုံနဲ့ အမည်မပါသောသူ … အားလုံး … ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင် … ။ အားပေးကြလို့ အားတွေအများကြီး ရှိသွားပါပြီ။
စာမှန်မှန် မတင်ဖြစ်ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော် … ။
Welcome back, mwaahhh
ချောင်းပေါက်အောင် ပြန်လာဖတ်မယ်နော် :)
ဘယ်နေရာ ဘယ်မြေနေ ဘယ်ရောက်ရောက်.
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ် အမရေ။ အသစ်တွေကိုမျှော်သလို အဟောင်းတွေပါ ပြန်ဖတ်ရင်း အမြဲလာအားပေးနေပါ့မယ်။း)
မမေရေ ပြန်ရေးတာ ၀မ်းသာတယ်ဗျို့ ဘယ်နိုင်ငံရောက်နေနေ ညလေးတို့က တစ်မိုးတည်းအောက်မှာ တူတူအမြဲရှိနေကြတာပဲလေ နော့ ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူး.... :)
နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်.... :)
သေ သောသူပြန်ရှင်လာသလိုပါပဲ.. သူငယ်
ချင်း ရယ်.... အရင်လိုအဖြစ်
ချီးယားစ်။ welcome back.
သဲတော်တော်တောင် နောက်ကျနေပြီနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀မ်းသာပါတယ်မမေရေ ပြန်လာတဲ့အတွက်ပေါ့။
Hey, welcome back :) We missed you.
Mingalarbar, Ma MayDarWi.
It is really good to see you back..
မမေရေ အရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ အမြဲတမ်း အားပေးနေ ပါတယ်။
ပြန်လာတာ မသိလိုက်ဖူး။ ဝမ်းသာတယ် မမေရေ။
မမေရေပြန်ရောက်လာတာအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ် အရင်ကလိုဘဲစာကောင်းလေးတွေရေးပါနော်။မမေကိုအားကျလို့ မမေမရှိတုံးဘလော့လေးဖန်တီးဖြစ်တယ်
11/01/2007 6:28 AM
(မ)မေဓာဝီပြန်လာတာကုို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။
i can read yr post but all comments are not! why? which fonts r u using, and where can i get it? that's my first visit. thanks.
11/02/2007 6:58 AM
အခုလို ဘလော့ဂ်ပြန်ရေးတာတွေ့ရတော့ အရမ်းကိုဝမ်းသာပါတယ် အမရေ..။ အမရဲ့စာတွေကို အားပါးတရ ပြန်ဖတ်ရတော့မယ်...။ အမရောက်နေတဲ့နေရာ မှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...။ အားပေးလျက်...။
Looking for the one who lost from our golden world for long long time, now she came back to us unexpectedly.Welcome her with my tear but not because of sad but because of happiness. I can be the last one who welcome her again here but i am not the last one who longing for you. I cant mention how i fell happy for your coming home again. Mamay.. no word to mention how i am happy for your coming home again.
အဲ ... အဲဗျာ။
ခုမှ ပြန်လာကြည့်ဖြစ်တယ်။ မမေတစ်ယောက် စာတွေ ပြန်ရေးနေပါရောလား။ အိမ်နဲ့ အဝေးကို ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါရဲ့ မမေရေ။ ကိုယ်လဲ အိမ်ဝေးနေသူမို့ ခံစားချက်ခြင်း တူညီလို့ ၀မ်းနည်းမိပေမယ့် အနှောက်အယှက်ကင်းရာ၊ ခေတ္တ လွတ်မြောက်ရာကို ရောက်နေကြောင်း သိလိုက်ရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
သတိရခြင်း ကဗျာ နှစ်ပုဒ် ...